Sidii khudbadda Obama u socotay - BBC News Somali
Sidii khudbadda Obama u socotay
28 Luulyo 2015
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa madaxda Afrikaanka u soo jeediyay in horumarka Afrika uu ku xiran yahay dimuqraadiyadda.
Halkan kala soco hadalkiisii.
02:53: (SGA) Obama: Waxaan rajaynayaa iyadoo aan dalka dib ugu laabanayaa, si la mid ah wiilkii dhalinyarada ahaa ee aan la kulmay, in aan arkay Afrikadii aan jeclaa in aan arko oo ah Africa da'yar oo horumaraysa.
02:50: (SGA) Obama: Sharaftaydu taada ayay ku xiran tahay, taaduna tayda ayay ku xiran tahay. Bal qiyaas hadii dowladaha oo dhan ay sidaa ahaan lahaayeen.
02:50: (SGA) Obama: Taariikhda bini'aadamka marka dib loo eego, meel kaliya ayaan ka wada nimid. muuqaalkeenu waa kala duwannaan karaa, balse ma aha in taas ay dhaliso in qofka kan kale uga duwan midan in taas loo cunsuriyeeyo ama loo xaqiro. Ma aha qabiil dartii in qof loogu xadgudbo, ugu dambaynta kuwa xadgudubka ku kaca ayaa ka taga bini'aadaminimada.
02:48: (SGA) Obama:U ogolaada in ay gabdhaha wax bartaan si dalka kaalintooda uga qaataan. Marka dumarka wax la qabo qoysaska way ka xoog badan yihiin, dalalku way ka barwaaqaysan yihiin. Dumarka ha la xoojiyo hadii aad doonaysaa dilkaaga inuu horumaro. Taas hadaan samaysona Maraykanku wuu kula shaqaynayaa.
02:47: (SGA) Obama:Gabdhaha hadaan waxba la barin ma noqon karaan Ingineero, dhaqaatiir, madaxwaynayaal.
02:45: (SGA) Obama: Dhaqamada qaar waa wax wanaagsan, balse qaar waa wax laga tagay. Guursiga gabdhaha ka yar 9 sano, waa dhaqan xun oo ah in laga gudbo.
Image caption Obama ayaa sheegay in horumarka Afrika ku xiran yahay dimuqraadiyadda.
02:43: (SGA) Obama: Gabdhaha Africa waa in loola dhaqmaa si la siman ragga.
02:42 (SGA) Obama: Waxaa la yiri hadii aan xoriyadda meel uga dhacno anagoo amni ka fakarayna, waxaa dhacaysa in labadaba ay faraha ka baxaan.
02:41: (SGA) Obama:Waxaa ka wada shaqayn karnaa sidii aan u hagaajin lahayn xaaladda amniga qaaradda.
02:38: (SGA) Obama: Mararka qaar waxaad arkaysaa kuwo ku leh hadaan dalka ka tago wuu burburayaa. Laakiin eeg waxa uu qabtay Madibo (Nelson Mandela) iyo George Washington, markii ay xukunka dageen, ma qaban intii ay madaxda ahaayeen.
02:37: (SGA) Obama:Ma fahmayo sababta ay dadku u doonayaan in ay xukunka ku sii dhaganaadaan, gaar ahaan marka ay lacag badan haystaa.
02:36: (SGA) Obama: Aniga hadda shaqadayda markii labaad ayaa la i doortay, balse maadaama uu sharcigu diidayo in mar sadexaad aan isa soo sharaxo waa in aan sharciga u hogaansamaa.
02:35: (SGA) Obama: Africa waxaa jirta in hogaamiyayaashu aysan xilka ka degin marka xilkoodu uu dhamaado.
02:34: (SGA) Obama:Waa in dhaan dhamaan u kacnaa marka aan aragno xoriyadda bini'aamka marka meel looga dhaco. Africana waa in ay kaalinteeda qaadataa.
02:30: (SGA) Obama: Horumarka dalka Kenya uu sameeyay oo kale ma aha in ay majaxaabiyaan in la hor istaago xoriyadda bulshada. Dalkan martida noo ah guulo ayay doorashooyinka ka gaareen. Waan u sheegay ra'iisul wasaaraha Ethiopia in xarigga weriyayaasha aysan demoqraadiyadda qayb ka ahayn.
02:29: (SGA) Obama: Waqtigaan la joogo dalal badan ayaan demoqraadiyad ogolayn. Demoqraadiyaddu doorasho ma aha, marka la xiro weriyayaasha ama ururada bulshada la xiro. Waxay u jirtaa magac ahaan ee uma jirto si dhab ah.
02:29: (SGA) Obama: Horumarka Africa wuxuu kaloo ku xirnaanayaa Demoqraadiyadda, waayo dadku waxay jecel yihiin in ay gacanta ku dhigaan mustaqbalkooda.
02:28: (SGA) Obama: Maraykanku wuxuu Africa ugu yaboohayaa iskaashi dhaqaale in ay la wada yeesho.
02:26: (SGA) Obama: In ka badan 40 dal oo dheeraad ah ayaa maalgalinaynaa si ay awood ugu yeeshaan ka hor tagga isbadalka cimilada. Taasina fursado dhinacyo kale ah ayay abuuri kartaa.
02:25: (SGA) Obama:Horumarka Africa wuxuu ku xiran yahay sida ay uga shaqeeyaan in ay dadka uga saaraan saboolnimada oo ay u gaarsiiyaan barwaaqo.
02:24: (SGA) Obama: Taariikhdu waxay na tusaysaa dalalka ugu wanaagsanaada in ay yihiin kuwa maalgaliya waxbarashada dhalinyarada.
02:23: (SGA) Obama: African-ka iyaga kaliya ayaa dhamayn kara musuqmaasuqa.
02:22: (SGA) Obama: Dhamaynta kansarka musuqmaasuqa qaaradda Africa, waa muhiim.
02:21: (SGA) Obama: Marka dalal badan ay maalgashadaan Africa, waxaa kordhaya dhaqaalaha. Waxaan rabaa in dal kasta uu Africa maalgashto, Africana ay dal kasta maalgashato.
02:19: (SGA) Obama: Ma adka in aad idinku wada ganacsataan ka hor inta aadan dibedaha ka fakarin.
02:19: (SGA) Obama: Waa in Africa ay dadaal xoog leh u gashaa sidii ay u kobcin lahayd dhaqaalaheeda oo ay u abuuri lahayd horumar dhab ah.
02:18: (SGA) Obama: Africa waxay u baahan tahay in ay abuurto dhowr milyan oo shaqooyin dheeraad ah.
02:18: (SGA) Obama: Howsha ugu daran maanta iyo tobanka sano ee soo socota waa in fursado loo abuuro jiilka soo kacaya.
02:16: (SGA) Obama: Waa in aan qirnaa in guulaha badan ay wali aasaas dabacsan ku taagan yihiin. Waxaa jira saboolnimo ba'an oo xadgudub ku ah sharafta bini'aadamka, inkastoo horumarro meelo badan ka jiraan.
02:15: (SGA) Obama:Qorshayaal badan ayaan bilownay ay ka mid yihiin amniga cuntada, quwadda...
02:15: (SGA) Obama: Waxaan rabaa in aan horumariyo xiriirka ka dhexeeya Maraykanka iyo Africa.
02:14: (SGA) Obama: Dad badan oo African ah waxay leeyihiin ma doonayso gargaar ee waxaan doonaynaa horumar ganacsi.
02:14: (SGA) Qaybo badan oo africa ah ayaa ku nool hadda rajo iyo sharaf
02:12: (SGA) Obama: Caalamku waa in uu aqoonsadaa sida ay qaaradda Africa u hormarayso.
02:12:(SGA) Obama: Adoonsigii wuxuu daldalan jiray dhaqaalaha Africa, ilaa ay ka kaceen oo ay iska qaadeen heeryadii gumaysiga.
02:11:(SGA) Obama: Qarniyo ayay qaadatay in qof walba uu helo xaqa uu u leeyahay sinnaan iyo cadaalad.
02:10:(SGA) Obama: "Qof walba wuxuu u qalmaa in si sinnaan iyo sharaf ah loola dhaqmo."
02:08: (SGA)Obama: "Waxaan idiin hortaaganahay anigoo Maraykanka ah, waxaan idiin hortaaganahay anigoo ah wiil uu dhalay nin Africa ah."
02:07:(SGA) Obama: " Sharaf wayn bay ii tahay in aan noqdo in aan noqdo madaxwaynihii ugu horeeyay ee u khudbeeya midowga Africa.
02:05: (SGA): Dr Zuma: "Waan idiin mahadcelinayaa, waxaanan hadda casuumayaa madaxwaynaha Maraykanka, Honourable Barack Obama, si uu noogu khudbeeyo."
02:00: (SGA): Dr Zuma: Madaxwayne maadaama aad ognahay in aan ka soo wadajeedno qaybta dunida. Qayb naga mid ah ayaad tihiin guud ahaan dadka noo yimaada.
01:55: (SGA): Dr Zuma: 2015 waa sanadka dumarka. Haween badan ayaa galay baarlamaanka Africa. Waxaan rabnaa in aan horumarinno dumarka dhinacyada sayniska, cadaaladda. Waxaan rabnaa in aan wax ka qabanno dhibaatooyinka ka soo gaara dumarka qalalaasaha iyo dagaalada dunida.
01:51 (SGA): Dr Zuma: Waxaa la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab iyo Boko Haram, waxaan isku dayaynaa in IGAD ay xal u helaan dhibaatada ka taagan Sudan-ta Koonfureed. Waxaan isku dayaynaa in xal UN kala shaqayno xalinta dalka Libya.
01:51: (SGA) Dr Zuma: Cadaalad darro ayaa ka jirta Qaramada midoobay. Africa matalaad kuma laha xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka, waan ognahay a aha go'aan xubin kaliya, balse waxaan waydiisanaynaa in dhamaan xubnaha in ay xaqiijiyaan in la saxo cadaalad darradan taariikhiga ah.
01:49 (SGA): Zuma: Africa waxay ka qayb qaadanaysa nabad ka dhalinta gobolka iyo guud ahaan dunida
01:48 (SGA): Dr Zuma: "Africa waxay doonaysaa in ay fa'iidaysato teknolojiyadda."
01:45 (SGA) Dr Zuma: "Africa waa qaarad dhalinyar oo sidaa sii ahaan doonto tobanka sano ee sii socota."